Haddii aad raadineyso weeyna si ay u soo ceshano xiriirada lumay ee HTC dareen, aad tahay meesha hadda. Tilmaan-bixiyahan waxa idin ​​tusiyo xal in tallaabooyinka. Read More >>
Sidee inuu ka soo kabsado xiriirada ka HTC EVO 4G? Ha welwelin. Tani waxay halkan article saamiyo aad hab fudud oo dib u soo ceshano xiriirada aad badiyay HTC EVO 4G effortlessly. Read More >>
Marka laga HTC xiriir la doonayay oo qalab soo kabashada lagu kalsoonaan karo, Wondershare Dr.Fone for Android waa fiican. Waxaa soo kaban karto, xiriirada in hab degdeg ah & fudud. Read More >>
Sidee baad u soo ceshano kartaa fariimaha tirtiray ka ugaar HTC ah? , Waxaad xaq u leh hab fudud u samayn kartaa in qasabno yar. Read More >>
Ma suurogalbaa in kabsado sawiro ka Motorola Droid? Haa, waxaad iyaga soo kaban karto, ka hor inta ay overwritten. Akhri hagahan si faahfaahsan halkan. Read More >>
Sidee baad u bogsan xiriirada on HTC ugaar aan u syncing la Gmail? Xaaladdan oo kale, waxaad u soo kaban karto, iyadoo lagu eegayo telefoonka. Guji si aad u aragto sida. Read More >>
Ma doonaysaa in ay dib u soo ceshano fariimaha tirtiray on qalabka Samsung ama kale? Waxaa jira hab fudud. Just hubiyo in si akhriso hagahaan buuxda hadda! Read More >>
Tilmaan-bixiyahan waxa u sheegay oo ku saabsan sida loo soo ceshano xiriirada lumay ee HTC Mid ka mid ah iyo HTC Mid ka mid ah X / V / S 3 kaliya tallaabooyin. Hubi in wixii faahfaahin ah hadda. Read More >>
Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida inuu ka soo kabsado photos, videos iyo audio tirtiray, formatted ama laga badiyay sababo kale ka HTC dareen Xl, Xe, 4G, iyo in ka badan. Read More >>
Wondershare Dr.Fone for Android, Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado fariimaha iyo xiriirada ka xasuusta gudaha ee Android. Read More >>
Maqaalkani waxa uu ku tusayaa sida aad dib u soo ceshano fariimaha ku HTC Mid ka mid ah iyo HTC Mid ka mid ah X / V / S in 3 tallaabo. Just in hubi oo akhri faahfaahin hadda. Read More >>
Android Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Android
Ma doonaysaa inay ka soo kabsadaan files tirtiray ka qalabka Android. Ha welwelin. Raac hagahan si aad u hesho dib u files tirtiray. Read More >>
Photo Recovery Android ka dhigayaa mid aad u fudud u isticmaala inuu ka soo kabsado photos tirtiray taleefanada Android iyo kiniiniyada. Kaliya 6 talaabooyin fudud, waxaa lagu sameeyey oo. Read More >>
Haddii aad tahay taageerayaasha phone Android, waxaad tahay nasiib si aad u hesho hab fudud si aad u daawato video telefoonka Android in this article. Read More >>
Ma dooneysaa inaad ogaato wixii qaabab video waxaa taageera telefoonada Android? Raadi jawaabahaaga halkan su'aal dheeraad ah oo ku saabsan Android qaabab video. Read More >>
Tani articles ay kula wadaagaan 5 dukaamada app sare ee Android isticmaala. Hubi in oo dooro mid ka mid ah oo isle aad ugu fiican. Read More >>
Posted by Selena Lee | 27.08.2015
Weligaa ma tirtiray files ka LG Optimus laakiin aad dib u doonayaan ka dib? Haddii aad, aad tahay meesha saxda ah. Tilmaan-bixiyahan waxa aad muujinaysaa sida inuu ka soo kabsado iyaga. Read More >>
Posted by Selena Lee | 25.08.2015
Ma doonaysaa inay ka soo kabsadaan fariimaha qoraalka ah ka phone jejebiyey Android? Waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone for Android, Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee. Read More >>
An Easy Jidka inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka Android Phones
Fariimaha soo kabashada Android! Dhaco tirtiray fariimaha qoraalka ah? Read this article inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ah tirtiray ka Android in dhowr daqiiqo. Read More >>
Ma waxaad si fiican oo ku saabsan Kies Mini ogaado? Waxaa jira waxyaalaha aad u leeyihiin in ay ogaadaan for Windows iyo Mac. Read More >>